တရုတ်အင်ဂျင်ဘလောက် 4G15T သွန်းသံပစ္စည်းထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စက်ရုံ |Zhengheng
လျှောက်လွှာမော်ဒယ်များ- Changfeng SUV၊ ဆီဒင်
ထုပ်ပိုးမှုအသေးစိတ်အချက်များ- တစ်ဦးချင်းစီထုပ်ပိုးခြင်း + ကြမ်းပြင်သေတ္တာ;255cm * 195cm 10 ခု/ပုံး
ဆလင်ဒါအချင်း * လေဖြတ်ခြင်း (မီလီမီတာ) : 75×85
Zhengheng Power မှ ထုတ်လုပ်သော ဆလင်ဒါလေးလုံးတပ် သံအင်ဂျင်တုံး 4G15T ကို တရုတ်နိုင်ငံ၏ နာမည်ကြီး SUV လုပ်ငန်း Changfeng အမှတ်တံဆိပ်သို့ ထောက်ပံ့ပေးသည်။အင်ဂျင်ဘလောက်ကို မီးခိုးရောင်သွန်းသံဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး၊ မြင့်မားသော ကြံ့ခိုင်မှု၊ တောင့်တင်းမှုနှင့် မြင့်မားစွာ ဝတ်ဆင်မှု ခံနိုင်ရည်ရှိမှု၊ မြင့်မားသော လုပ်ငန်းစဉ်စွမ်းဆောင်ရည်၊ တုန်လှုပ်မှု စုပ်ယူမှုနှင့် ဖြတ်တောက်မှုတို့ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။
ဆလင်ဒါဘလောက်သည် မော်တော်ကားအင်ဂျင်တွင်သာမက မော်တော်ကားတွင်ပင် အရေးကြီးဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။အင်ဂျင်စက်၏ အရည်အသွေးသည် အင်ဂျင်အရည်အသွေးကို တိုက်ရိုက်သက်ရောက်ပြီး မော်တော်ကား၏ အလုံးစုံအရည်အသွေးကို ထိခိုက်စေပါသည်။ထို့ကြောင့်၊ အင်ဂျင်ဆလင်ဒါဘလောက်များ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို မော်တော်ကားထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများက အာရုံစိုက်ခဲ့သည်မှာ ကြာပါပြီ။အင်ဂျင်ဆလင်ဒါဘလောက်သည် အင်ဂျင်၏အခြေခံအစိတ်အပိုင်းများနှင့် အရိုးစုဖြစ်ပြီး အင်ဂျင်တပ်ဆင်ခြင်း၏အခြေခံအစိတ်အပိုင်းများလည်းဖြစ်သည်။ဆလင်ဒါဘလောက်၏ လုပ်ဆောင်ချက်မှာ ပစ္စတင်၊ ချိတ်ဆက်လှံတံ၊ crankshaft နှင့် အခြားရွေ့လျားနေသော အစိတ်အပိုင်းများ၏ တိကျသောအနေအထားကို ပံ့ပိုးပေးပြီး အင်ဂျင်၏ လေဝင်လေထွက်၊ အအေးခံခြင်းနှင့် ချောဆီရရှိစေရန် သေချာစေရန်ဖြစ်သည်။ကားအင်ဂျင်ဆလင်ဒါတုံးနှင့် crankcase များကို ဆလင်ဒါဘလောက် - crankcase ဟုခေါ်သည်။ဆလင်ဒါဘလောက်သည် အများအားဖြင့် မြင့်မားသောအပူချိန်၊ မြင့်မားသောဝန်၊ ပြင်းထန်စွာ ဝတ်ဆင်ရသည့်အခြေအနေများတွင် အလုပ်လုပ်သောကြောင့်၊ ကြီးမားသောဖိအားအောက်တွင်၊ အင်အားသည် ရှုပ်ထွေးပါသည်။တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ဓါတ်ဆီနှစ်မြှုပ်ခြင်းအောက်တွင် အလုပ်လုပ်သော အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်သည် စိုစွတ်နေပါသည်။ဆလင်ဒါ၏စွမ်းဆောင်ရည်လိုအပ်ချက်များကိုအသုံးပြုခြင်း- ဆလင်ဒါ၏အလုပ်အခြေအနေများသည်ဆလင်ဒါတွင်မြင့်မားသောကြံ့ခိုင်မှု၊ တောင့်တင်းမှု၊ မာကျောမှု၊ မြင့်မားသောဝတ်ဆင်မှုခံနိုင်ရည်ရှိရန်နှင့်ကောင်းမွန်သောအပူအအေးခံနိုင်ရည်ရှိရန်၊ တစ်ချိန်တည်းတွင်ဆလင်ဒါ၏လုပ်ဆောင်မှုအခြေအနေများကဆုံးဖြတ်သည်၊ , တုန်ခါမှုလျှော့ချရေး စသည်တို့ဖြစ်သည်။
Zhengheng Power သည် တရုတ်နိုင်ငံမှ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အင်ဂျင်ဆလင်ဒါတုံးထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီး၊ မော်တော်ကားသံသွန်းအင်ဂျင်တုံးပေါင်း သန်း 20 ကျော်ကို ထုတ်လုပ်ထားပြီး၊ အင်ဂျင်ဆလင်ဒါတုံးကို ပူးတွဲသုတေသနပြုခြင်းနှင့် ထုတ်လုပ်ခြင်းအရ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နည်းပညာအဖွဲ့၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုဖြင့် လည်းကောင်း၊ ပြီးပြည့်စုံသောရောင်းချပြီးနောက်ဝန်ဆောင်မှု။သင်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်စောင့်မျှော်ပါ။
1. ကျွန်ုပ်တို့သည် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ နှစ်ပေါင်းများစွာနှင့် ဆလင်ဒါတုံးများ၏ ခိုင်မာသောဒေတာဘေ့စ်ဖြင့် နှစ်ပေါင်း 40 ကျော်ကြာ အင်ဂျင်တုံးထုတ်လုပ်မှုနှင့် အင်ဂျင်တုံးထုတ်လုပ်မှုကို အာရုံစိုက်ပါသည်။
1. မူရင်းထုပ်ပိုးမှု- 1PC/piece၊ 10 pieces/box (ထုတ်ကုန်ပေါ်မူတည်၍ အရေအတွက်)၊ပလပ်စတစ်ထုပ်ပိုးခြင်း + ထုပ်ပိုးထားသော ထုပ်ပိုးခြင်းသေတ္တာ
ယခင်- အင်ဂျင်ဆလင်ဒါဘလောက် 3SZ
နောက်တစ်ခု: B12 ဆလင်ဒါခေါင်းကို အလူမီနီယံသွန်းလုပ်ထားသည်။